သတင်း - NINTENDO SWITCH PRO ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ခလုတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အစားထိုးမှု၊ ကြိုးမဲ့ခလုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အားပြန်သွင်းနိုင်သော
1. [ဗားရှင်း 12.0.0 အပ်ဒိတ်အသုံးပြုသူများ- အဆင့်မြှင့်ထားသော ပက်ကေ့ခ်ျအသစ်တစ်ခု ရယူရန် ရောင်းချသူကို တောင်းဆိုပါ။!!【ကြိုးမဲ့နှင့် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်- Bluetooth မှတဆင့်၊ ဤ switch pro controller ကို switch console သို့ လျင်မြန်စွာ တည်ငြိမ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကြိုးမဲ့နည်းပညာသည် နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ ၃၂ ပေအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်ပြမှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
2.ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်- အသေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသိရှိရန် တပ်ဆင်ထားသော 6-ဝင်ရိုး gyroscope မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မွမ်းမံထားသောခလုတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အလွန်တိကျသောအမြန်နှုန်း၊ အနေအထားနှင့် တိကျသောထိန်းချုပ်မှု၊ မြန်သောစတင်/ရပ်သွားနိုင်သည်။
3.Dual Motors & Turbo လုပ်ဆောင်ချက်- Funlab dual-motor wireless controller သည် ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကို3အဆင့်တုန်ခါမှုမှတစ်ဆင့် မြှင့်တင်ပေးသည်၊၊ သင်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ချက်ဖြင့် ဂိမ်းထဲသို့ဝင်နိုင်စေသည်;ချိန်ညှိနိုင်သော တာဘိုအမြန်နှုန်း3ခု၊5ကြိမ် / စက္ကန့်မှ 12 ကြိမ် / စက္ကန့် နှင့် 20 ကြိမ် / စက္ကန့်။တိုက်ပွဲဝင်ရန် အကောင်းဆုံး တာဘိုအမြန်နှုန်းကို ခံစားနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးလူအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်သည်။
Ergonomics- gamepad ၏ ပုံသဏ္ဍာန်သည် သင့်လက်နှင့် သဘာဝအတိုင်း လိုက်ဖက်ပါသည်။လက်ကိုင်ကို ပွတ်တိုက်မှုတိုးစေပြီး ချွေးထွက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် texture ဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။အချိန်အကြာကြီး ဂိမ်းဆော့ရင်တောင် စိတ်သက်သာရာ ရနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်းကြာမြင့်ချိန်- Funlab switch controller gamepad တွင် built-in 600mAh လီသီယမ်ဘက်ထရီပါရှိပြီး အားအပြည့်သွင်းပြီးနောက် 8-10 နာရီအထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အားသွင်းချိန်သည် 2-3 နာရီဖြစ်သည်။